Nagarik News - नक्कली प्रमाणपत्र अभियोगमा चर्चित डा.जावेद पक्राउ
17 Jun 2016 | 13:24pm
विराटनगर— नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा प्रहरीले विराटनगरका चर्चित फिजिशियन डाक्टर जावेद अख्तर अन्सारीलाई शुक्रवार पक्राउ गरेको छ। विराटनगरस्थित लाइफ गार्ड अस्पतालबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
अस्पालको क्याबिनमा बिरामी जाँचिरहेका बेला बिरामीको पूर्जा नै काटेरै प्रवेश गरेका ब्यूरोका सदा पोशाकका प्रहरीले डा. अख्तरलाई पक्राउ गरेका हुन्। लाइफ गार्ड अस्पतालका प्रवन्ध निर्देशक डा. कैलाशकुमार श्रेष्ठले अपरिचित केही व्यक्तिले डा. जावेदलाई अस्पालबाटै नियन्त्रणमा लगेको नागरिकन्युजलाई बताए।
'डा. जावेद क्याबिनमा बिरामी जाँच्दै थिए, दुई जना बिरामीकै पूर्जा काटेर क्याबिनमा छिरे,' डा. श्रेष्ठले भने, 'उनीहरुले नै डा. जावेदलाई लिएर गए ।'
सिआइबी टोलीले पक्राउ गरेका डा.जावेदलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा राखिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार डा. जावेदलाई आजै काठमाडौं लगिँदैछ।
भारतीय दूतावासको चासो
भारत कत्तकता घर भएका डा.जावेद करिव डेढ दशकदेखि विराटनगर बसेर चिकित्सा अभ्यास गर्दै आइरहेका छन्। डा.जावेदलाई ब्यूरोले पक्राउ गरेको विषयमा भारतीय दुतावासका विराटनगरस्थित फिल्ड कार्यालयले पनि चासो देखाइरहेको छ।
सरकार होइन, काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ : दाहाल